Hindiya, COVID iyo Safarka: Hogaamiyaasha 2021
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Hindiya, COVID iyo Safarka: Hogaamiyaasha 2021
Wararka Albania • Jebinta Wararka Caalamka • Warshadaha Warshadaha • Wararka Hindiya • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Hindiya COVID nooc
Ugu wac qaniis duulaya, dareen caloosha, falanqeyn la bartay, ama durba mugdi gudahood. Sharaxaad kasta oo ku saabsan sida Hindiya, COVID iyo socdaalku u dhaqmi doonaan sannadka soo socda waxay ku xirnaan doontaa sida qofku u arko iyo xaggee ayuu ka arkaa.
Xaqiiqdii, 2020 waxay ahayd sanad aan hore loo arag. Haa, weligeed hore uma dhicin Covid-19 gilgishay adduunka, gaar ahaan wuxuu si aad ah u garaacay warshadaha socdaalka iyo dalxiiska Hindiya gudaheeda, sida adduunka intiisa badan, wax walbana waxay noqdeen kuwa ciladoobay markii COVID-19 ay u muuqatay iyadoo duulimaadyo la joojinayo, hudheelada taagan meel u dhow madhan, iyo wakiillada safarka iyo shaqooyinka wararka dhammaan sababaha qaldan.
Hogaamiyaasha warshaduhu waxay fiirinayaan 2021 iyo wixii ka dambeeya dhowr siyaabood, qaarkood way ka wanaagsan yihiin kana rajo fiican yihiin kuwa kale. Waxa kaliya ee taagan ayaa ah in tallaalka la sugayo ee aadka u badan la sugayo inbadan oo rajo ah maalmo wanaagsan, laakiin taasi sidoo kale ma noqon karto mid fudud sida ay u eegayso qiimaha wajiga.
Nakul Anand, oo ah Agaasimaha Fulinta ee Hoteelada ITC iyo Gudoomiyaha FAITH, gudiga sare ee ururada safarada, wuxuu dareemayaa in xeerar adag oo dhanka caafimaadka iyo nadaafada ah oo ay weheliyaan nadaafada ay noqon doonaan wax cusub oo caadi ah, sidoo kale kala fogaanshaha jirka.
Huteeladu waxay arki doonaan isbadalo waawayn oo kuyimaada, ayuu yidhi hudheelka ruug cadaaga ah, iyo "goobta, goobta, goobta," waxaa lagu badali doonaa halkudhig ah "nadaafad, nadaafad, nadaafad."
Tallaalku xoogaa xoogaa ayuu fududaanayaa, ayuu saadaaliyay, isaga oo intaa ku daray in xirmooyinka gudaha iyo joogitaannadu ay soo qaadanayaan, halka dalxiiska caalamiga uu qaadan doono waqti dheeri ah.
Ms. Priya Paul oo ka tirsan silsiladda The Park, Apeejay Group, ayaa shaaca ka qaaday inay durba arkeen qiyaastii boqolkiiba 70 deggenayaasha hudheelladooda, iyo wixii intaa ka badan, heerarka Dakhliga Sannadlaha ah ee Sannadlaha ah (ARR) ee sannadka 2019. Waxay saadaalisay dadka ajaanibta ah ee soo galaya inay soo qaataan rubuca 3aad iyo 4aad ee 2021.
J. Taneja oo ka tirsan Travel Spirit International waxay rajo weyn ka qabtaa in tallaalku keeno waxtar wanaagsan laakiin wuxuu si dhakhso leh ugu darayaa in maamulkiisa ay caqabad ku noqonayso sababo la xiriira caadiga cusub ee fogeynta iyo fayadhowrka oo la raacayo. Waxa uu dareensan yahay in ololaha loogu safrayo dalka gudihiisa uu si fiican u qabsoomay iyo in dalxiis mas'uul ah, dalxiis fayoqabka ah, iyo dalxiisyada dabiiciga ah ay diiradda saari doonaan hadda.
Subhash Goyal oo ka tirsan STIC Travel iyo Xoghayaha Guud ee IIMAANKA, wuxuu saadaalinayaa in wakiiladda safarku ay la qabsan doonaan safarro cusub oo ku habboon xaaladda cusub ka dib faafitaanka. Hawl wadeenadu waa inay noqdaan kuwo hal abuur badan, dadkuna waxay rabaan inay u safraan meelo fogfog oo saxmad yar tahay.
Sunder Advani, oo ah ruug cadaa wershede ah kana hawl gala qaybaha kala duwan ee safarka iyo CMD ee Huteellada Advani, ayaa arka muhiimadda badan ee caymiska, xitaa maadaama tallaalku door ka ciyaari doono. Xeerarka karantiil ee kaladuwan ayaa ah wax laga xumaado, ayuu tilmaamay Advani, oo ka howlgeli jiray WTTC, dalxiisyada, iyo hoteelada. Dibad bixintu waxay qaadan doontaa waqti inuu ku soo kabto ayuu saadaaliyay.
Rajindera Kumar ee Danjiraha iyo Madaxweynihii hore ee FHRAI, waxay soo jeedineysaa in hoteelada ay diiradda saaraan tirada mugga xilligan, halkii ay ka ahaan lahaayeen ARRs. Wuxuu ka qoomameynayaa in siyaasadaha dowladu aysan caawineynin dalxiiska, oo kursiga dambe ku fadhiisanaya fakarka rasmiga ah inkastoo ay jiraan sheegashooyin taas lid ku ah.
Ajay Bakaya oo ka tirsan kooxda Sarovar ayaa fiirinaya 2021 rajo wanaagsan. Wuxuu u maleynayaa xilliga firaaqadu inuu ka fiicnaan doono safarka ganacsiga wuxuuna rajaynayaa in silsiladdu ay yeelato boqolkiiba 70 degitaan marka loo eego 2019.
Bhim Singh oo ka tirsan Rajasthan Tours ayaa saadaalinaya koror 25% ah ee dalxiiska haddii tallaalku arko iftiinka maalinta, halka Mukesh Goel oo ka socda Oriental Travels uu saadaalinayo in arrimuhu ay eegi doonaan oo keliya 2023.